Ndụmọdụ iri maka ịhazi mmezi kwesịrị ekwesị
Kedu ihe jikọrọ elekere, skateboard na ụlọ ọrụ mmepụta ihe? Ha nile na-adabere na bebi iji kwado mmegharị ntụgharị ha dị mma. Agbanyeghị, iji nweta ntụkwasị obi, ekwesịrị ịchekwa ma dozie ya nke ọma. Nke a ga - eme ka ndụ dị ogologo, na - egbochi ọtụtụ nsogbu ...
Gini mere oji ebu m na-eme mkpọtụ na mberede?
Jingnai Machinery bụ a na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ agba enterprise tụnyere R&D, mmepụta na ahia. Companylọ ọrụ a dị na obodo Liaocheng, mpaghara Shandong. Anyị nwere ike inye ọkwa P0 dị mma (Z1V1), P6 (Z2V2), P5 (Z3V3). Companylọ ọrụ ahụ enwetawo ISO9001: 2008 na IATF16949: usoro 2016 ...
E nwere ụfọdụ ihe mgbagwoju anya na gburugburu mmekọrịta dị n'etiti nkenke nke a na-amị, nnabata ihe nrụpụta ya na ogo nke mwepụ nke ime ma ọ bụ 'egwuregwu' n'etiti agbụrụ na bọọlụ. N'ebe a, Wu Shizheng, onye isi nchịkwa nke ndị ọkachamara JITO biarin na nke obere, na-amụba ...
Eprel 23-27, 2019, ụlọ ọrụ anyị ga-esonye na Trade Fair maka Autoparts na Brazil (Sao Paulo). Booth No.: P156 Nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ka ha gaa ma kpaa nkata.
site ha na 20-11-24
Site na September 19th ruo 22th 2018, companylọ ọrụ anyị ga-aga China Ngosipụta Mmepụta China International na Shanghai, Booth No bụ E251, nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ịga leta ma kpaa nkata.
Site na November 28th ruo Disemba 1th na 2018, ụlọ ọrụ anyị na-esonye na Automechanika Shanghai, Booth Nke 1H91.welitere ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ileta ma kpaa nkata.
Site na November 28th ruo Disemba 1th na 2018, ụlọ ọrụ anyị na-esonye na Automechanika Shanghai ， Booth Nke 1H91 na-anabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ileta ma kpaa nkata.
Site na November 27th ruo 30th na 2018 ụlọ ọrụ anyị ga-esonye na bauma CHINA 2018, Booth No bụ N5.691.welitere ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi ka ha gaa ma kpaa nkata.
Site na June 10th ruo 12th, 2019, ụlọ ọrụ anyị ga-esonye na ngosipụta ụgbọ ala Frankfurt na dubai. Nọmba ụlọ ntu ahụ bụ sa-j38. nabata ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi ka ha gaa ma kpaa nkata.
Site na Eprel 15 ruo nke 19 na 2019 ụlọ ọrụ anyị ga-esonye na nnọkọ 125th nke Canton Fair, Booth No is7.1D46. Nabata ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi ka ha gaa ma kpaa nkata.